October 12, 2020 - Achawlaymyar
ကိုဗစ်ကာကွယ်ကုသနေတဲ့ ရိုးမစင်တာအတွက် အလှူငွေနဲ့လိုအပ်တာတွေလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မေကဗျာ
October 12, 2020 by Achawlaymyar
ဇာတ္လမ္းတြဲေတြနဲ႔ Music ဗီဒီယိုေတြ ၊ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းေပါင္းမ်ားစြာမွာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ပရိသတ္အားေပးလက္ခံမႈရရွိထားတဲ့ ေမကဗ်ာကေတာ့ အႏုပညာအလုပ္အျပင္ သူမရဲ့ စီးပြားေရးတစ္ခုအေနနဲ႔ အထည္ေတြ Live လႊင့္ၿပီး အြန္လိုင္းကေနတဆင့္ ေရာင္းခ်ေနခဲ့တာပါ ။ သူမရဲ့စီးပြားေရးအျပင္ တျခားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အပ္ထားတဲ့ အလုပ္ေတြကိုလည္း Live လႊင့္ၿပီးေရာင္းခ်ေပးေနတာပါ လတ္တေလာမွာေတာ့ ရိုးမ center (၂) မွာ ေမကဗ်ာနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၊ Fan မ်ားရဲ့ စုေပါင္းအလႉေလးအျဖစ္ အလႉေငြ ၅ သိန္း ၊ အဖ်ားတိုင္းစက္ ၃ လုံး (၇၅၀၀၀) ၊ Vital အားေဆး ဘူး ၅၀ ( ၃၂၅၀၀၀) ၊ ပတၱျမားေရာင္ျခည္ ငွက္ကၽြန္းငွက္သိုက္ ဘူး ၅၀ ( … Read more
တနလာၤသားသမီးများအတွက် ဘဝတစ်သက်စာ ဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာများ မိမိတို့ရဲ့ အသက်အပိုင်းခြားကို ကြည့်ပြီး အဟောကို ဖတ်ပါလေ။ ညံ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ချေရမယ့် ယတြာကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ နှစ်တွေမှာလည်း ကောင်းသထက် ကောင်းစေဖို့ ချေရမယ့် ယတြာတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တနလာၤသားသမီး ဖြစ်သောသင်သည် အသက်….၁၊၉၊၁၇၊၂၅၊၃၃၊၄၁၊၄၉၊၅၇၊၆၅၊၇၃၊၈၁၊ ၈၉၊၉၇၊၁၀၅ နှစ်အတွင်း ၌….တနင်္လာ သက်ရောက် ဖြစ်၏ယခုနှစ်အတွင်း သင်သည် အလှူအတန်း ကိစ္စများ မုချ လုပ်ရမည်ဖြစ်၏။ငွေအစုလိုက် အပုံလိုက် ဝင်လာမည်ဖြစ်၏။ မိမိ၏အလုပ်မှလည်းကောင်း၊ထီပေါက်၍လည်ကောင်း ဝင်လာတက်၏ ။ ဤကာလ၌ သာမန်အခြေအနေမျိုးမှနေ၍ စီးပွားအရှိန်အဟုန်နှင့် တက်ကာ အိမ်ပိုင်၊ ကားပိုင်ဖြစ်သွားတက်၏။မိမိအားပြသနာလုပ်နေသူများရှိလျှင် အဆင်ပြေသွားလိမ့်မည်။မသင့်မြတ်သူများနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်သွားမည်။ အရေးကြီးသော ကံများကို ထိန်းသိမ်းရန် အလွန်အရေးကြီးသော အချိန်အပိုင်းအခြားဖြစ်၏။ ဤအချိန်၌ မထိန်းသိမ်းနိုင်လျှင် နောင်(၃)နှစ် … Read more
ခင္ပြန္းေျခရႈပ္ေနလို႔ဆိုျပီး ဘုန္းၾကီးထံအကူညီသြားေတာင္းမိတဲ့ အမ်ိဴးသမီးရဲ႕အျဖစ္…
ခင္ပြန္းေျခရႈပ္ေနလို႔ဆိုျပီး ဘုန္းၾကီးထံအကူညီသြားေတာင္းမိတဲ့ အမ်ိဴးသမီးရဲ႕အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ သူ႔ခင္ပြန္းသည္ ေဖာက္ျပန္ေနတာကို သိလိုက္ရပါတယ္။ စိတ္ထိခိုက္ၿပီး သူ႔ဘဝကို ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္ရမယ္ဆိုတာ မသိေတာ့တာေၾကာင့္ေတာင္တစ္လုံးေပၚမွာ သီတင္းသုံးတဲ့ ပညာရွိဘုန္းေ တာ္ႀကီးထံကေန အႀကံဉာဏ္ရယူဖို့ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ လမ္းေလၽွာက္ခရီး၊ ေတာင္တက္ခရီးေတြအပါအဝင္ ရက္အနည္းငယ္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ေတာင္ထိပ္မွာ သီတင္းသုံးေနတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးထံ ေရာက္သြားပါတယ္။ တပည့္ေတာ္မရဲ့ဘဝတစ္ခုလုံးမွာ သူ႔အတြက္ပဲ အခ်ိန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ႏုပ်ဴ ိမွုေတြကိုရင္းၿပီးသူ႔အနားမွာပဲ ေနခဲ့တယ္။ သူ႔ကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီးလည္း ျပဳ စုခဲ့တယ္။ ခုေတာ့ သူက တပည့္ေတာ္မထက္ငယ္ရြယ္တဲ့သူကို ေရြးသြားၿပီ။ တပည့္ေတာ္မမွာ အခု ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး။ဘာဆက္လုပ္ရမွန္းလဲ မ သိေတာ့ဘူး”လို့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကို ေလၽွာက္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ဘုန္းႀကီးက အမ်ဴိးသမီးကို ကြတ္ကီးတစ္ခုစားဖို့ လွမ္းေပးလိုက္ပါတယ္။စားၿပီးတဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီးကို “အရသာေကာင္းလား”လို့ ေမးလိုက္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးက “တင္ပါ့.. ေကာင္းပါတယ္ဘုရား”လို့ ေျဖတဲ့အခါ … Read more
မိန္းကေလးေတြ အေနနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ အတူအိပ္တဲ့ အမ်ိဳးသားနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ဘာေတြရင္ခုန္တက္ၾကတယ္ ၊ စိတ္ဝင္တစား ရွိၾကတယ္ဆိုတာကို သင္သိပါသလား ? ေယာက်ၤားေလးေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး မိန္းကေလးေတြ စိတ္ဝင္စားတဲ့ အရာေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ (၁) ရင္ဘက္ေမႊး အမ်ိဳးသားေတြရဲ. ရင္ဘက္မွာ အေမႊးအမ်ွင္ ေရးေရးေလး ရွိေနတာမ်ိဳးကို ရင္ခုန္တက္ၾကပါတယ္ ၊ ထူလပ်စ္ၾကီးမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ သန္႔ရွင္းတဲ့ အေမႊးအမ်ွင္မ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္ထားရင္ေသခ်ာေပါက္ မိန္းကေလးေတြ ေၾကြမွာပါ ။ (၂) အမ်ိဳးသားအဂါၤၾကီးတာကို မႏွစ္သက္ အမ်ိဳးသား အမ်ားစုဟာ သူတို႔ရဲ. အမ်ိဳးသားအဂါၤၾကီးရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ႏွစ္သက္မယ္လို႔ ယူဆထင္ျမင္တက္ၾကပါတယ္ ၊ ဒါဟာ မွားပါတယ္ ၊အဂါၤၾကီးတာဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ နာက်င္မႈကို ျဖစ္ေစတာမို႔ ဒါကို မႏွစ္သက္ၾကပါဘူး။ သာမန္အရြယ္အစားကသာ … Read more
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ပုံရိပ်ကို နင်းပြီး ဖျော်ဖြေမိခဲ့တဲ့အပေါ် ပရိသတ်ကိုတောင်းပန်လိုက်တဲ့ Project K အဖွဲ့ဝင် ဘုန်းနေလင်း
အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ညနေပိုင်းက တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Asia Song Festival 2020 မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ Project K အဖွဲ့အနေနဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် ပုံရိပ်ကို နင်းပြီး ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ထားမှုအပေါ် လူမှု ကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ် Project K အဖွဲ့ဝင် ဘုန်းနေလင်းကတော့ ပရိသတ်ကြီးကိုခွင့်လွှတ်ကြဖို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုန်းနေလင်းက “နားလည် ခွင့်လွှတ် ပေးနိူင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ 🙏🙏🙏 ကျွန်တော်တို့ အကောငိးဆုံး ကြိုးစားတင်ဆက်ခဲ့တာပါပဲ မထင်မှတ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေအတွက် တောင်းပန်ရင်း ဆက်ကြိုးစားသွားပါ့ မယ်” ဆိုပြီး တောင်းပန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Project K တစ်ဖွဲ့လုံးကလဲ ဒီပြသနာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းတောင်းပန်ထားကြပါသေးတယ်။ Project K အဖွဲ့ဟာ လူငယ်ကောင်လေး(၇) … Read more
ကမ္ဘာကျော် လက္ခဏာဆရာ ဖြစ်သော ကိုင်ရိုသည် ကမ္ဘာတွင်ဖြစ်ပျက်လာမည့် အရာများကို ကြိုတင်ဟောကိန်း ထုတ်ခဲ့ရာ မှန်ကန်သဖြင့် အလွန်မှပင် ထင်ရှားကျော်ကြားလေသည်။ တစ်နေ့တွင် မစ္စတာကိုင်ရိုထံသို့ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး ရောက်ရှိလာလေသည်။ ကိုင်ရိုမှ ခရီးဦးကြိုဆို နေရာထိုင်ခင်းပေးပြီး သံအမတ်ကြီးနှင့် စကားစမည်ပြောလေသည်။ ကိုင်ရိုသည်ကား ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် တော်တော်များများနှင့် ကမ္ဘာ့ရေးရာများကို ဟောကိန်းထုတ်ထားရာ မှန်ကန်သဖြင့် နိူင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ဝန်ကြီးများ၊သံအမတ်များ ဖြင့် သိကျွမ်းလေသည်။ သံအမတ်ကြီးလာသောအချိန်သည်ကား ပထမ ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးသော အချိန်ဖြစ်လေသည်။ သံအမတ်က ကိုင်ရိုအားမေးလေသည်။ မစ္စတာ ကိုင်ရိုရေ တခုလောက်ကူညီပါ။ ဘာများလဲ သံအမတ်ကြီး ။ အခုက ကြီးမားတဲ့ ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးခဲ့ပြီလေ ။ တို့အမေရိကန်တွေ မဟာမိတ်ဘက်ကဝင်ကူတိုက် လို့ နိဂုံးချုပ်သွားပြီ။ ဒီနောက်ပိုင်း ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ သိချင်တာ။ကိုင်ရိုလည်း နာရီဝက်ခန့် … Read more